SOLAPORTAL OO SOO OGAATEY SHAQSIGII FACEBUUGA BUGTA AH KA SAMEYSTAY MUKHTAAR CUTI ISLA MARKAANA KA XIRTAY "SPECIAL INVESTIGATION"
On 1/13/2016 (IST)
Shabakada SOLAPORTAL ayaa waxay baaritaan waqti dheer qaatey ku sameysay FACEBOOK si been abuur ah loogu sameystay magaca LEGEND MUKHTAAR MAXAMED AXMED "MUKHTAR CUTI" kaasoo shaqsi sameystay uu iska dhigay isla markaana isticmaaley magaca MUKHTAR CUTI.
Shaqsigaan oo shabakada SOLAPORTAL ay soo ogaatey magaciisa iyo meesha uu ku noolyahay, iyadoo adeegsaneysa qubaro dhanka cilmiga computerada ku taqsusay, ayaa isla markiiba gebi ahaan ka xiray BOGGA FACEBOOK ee shaqsigan TUUGA ah uu ku leeyahay.
MUKHTAAR CUTI waxaa lagu tilmaami karaa in uu ahaa cayaaryahankii ugu tayada fiicnaa ee soo mara wadanka Somaliya,isagoo u cayaaray naadiga wakaalada BATROOLKA iyo qaranka Somaliya,ma jirin cayaaryahan la mid ah Mukhtaar xirfadiisa oo kubad ka soo cayaaray wadanka Somaliya.
Sida aad ku aragtaan sawirrada hoose, dadkii ay asxaabta ahaayeen iyo kuwii ay berisamaadka isla soo cayaareen, waa la qaldey oo waxay moodeen in MUKHTAR CUTI uu yahay shaqsigan,tabcan LEGEND MUKHTAR ma leh FACEBOOK mana isticmaalo.
Xiligii aan wadney baaritaanka waxaan ogaaney shaqsigan in uu yahay qof ku dhex jira isboortiga isla markaana ku nool Magaalada TORONTO ee dalka KANADA,MUKHTAR wuxuu ka codsadey in aan magaciisa la soo bandhigin,taasoo ku tuseysa in cayaaryahankii BATROOLKA iyo QARANKA SOMALIA,uu yahay shaqsi mar walba doonaya in uu wanaaga ka shaqeeyo.
Qaabka aan u helnay waa inagoo PRIVATE MESSAGE u dirnay shaqsigan, isla markii uu ka soo jawaabeyna waxaan ogaaney DNS iyo IP ADDRESS, oo kuu sheegaya meesha uu degan yahay,ka dibna waxaan isku xirnay, PROFILE BEHAVIORKIISA oo aan ku aragney in uu leeyahay 5 FACEBOOK oo kale, kaasoo mid ka mid ah uu isaga si rasmi ah u leeyahay.
Shaqsigan aad ayaa looga yaqaanaa BAHDA ISBOORTIGA - waxa keliya uu shabakada u ogolaadey MUKHTAR CUTI waa in aan sheegno shaqsigaan in uu ku nool yahay TORONTO!.
Isla markiiba waxaan ka XIRNEY ACCOUNTKA iyo MAGACA bugta ah ee laga sameystay MUKHTAAR CUTI,oo ah shaqsiyada sida goonida ah looga IXTIRAAMO,shabakada SOLAPORTAL.
RIIX LINKIGII BUGTA AHAA EE AAN XIRNAY HALKAN
Ka dib markii aan hawada ka saarnay,shaqsigan wuxuu mar labaad sameystay FACEBOOK magaca MUKHTAAR CUTI,isagoo 2 saaxiib oo aan ka warqabin keliya ku leh,inta aan baaritaanka sameyn wuxuu saaxiib la ahaa 1253,iminka waxaan soo bandhigi doonaa magaciisa iyo meesha uu ku nool yahay.
Hadaba waxaa is weydiin leh,maxaa ku kalifay shaqsigan in uu isticmaalo sawirrada iyo magaca MUKHTAAR? jawaabtu waa SIMPLE! waa shaqsi maalin walba isku dira bahda isboortiga, isagoo rabay in uu isticmaalaya magaca MUKHTAAR si uu helo macluumaad iyo hadalo dhanka isboortiga ee LONDON iyo TORONTO.
Mar labaad hadii aad eegtid sawirrada uu shaqsigan soo geliyey waxaad ku aragtaa in - dadka asxaabtiisa ah uu san 1 JAWAAB siin,taasoo ku tuseysa in uu ka baqay ogaanshaha, hadii ay dhacdo in SU,AAL qaas ah la weydiiyo.
Shabakada SOLAPORTAL waxay gacan ka siin kartaa dhanka TIKNOOLIJIYADA,hadii ay jiraan shaqsiyo la isticmaalay magacooda ama sawirkooda.
Hadii arimo noocan ah ay kula soo dersaan,fadlan EMAIL u dir info@solaportal.com si aan baaritaan ugu sameyno.